दस्तावेज Archives ~ Banking Khabar
कुन-कुन क्षेत्रमा कति बजेट ? (आ.व. ७७/७८ को बजेट, पूर्ण पाठसहित)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका छन् । जसमा पुँजीगत बजेट २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यबस्थापन बजेट ११ प्रतिशत रहेको छ भने अरु सबै चालु खर्च अन्तरगत रहेको छ ।चालु आवको बजेट १५
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीद्धारा १ सय ३८ बुँदे बक्तव्य जारी (पूर्ण पाठ सहित)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ६४ बर्ष पुरा गरी ६५ बर्ष प्रवेशका अबसरमा १ सय ३८ बुँदे बक्तव्य जारी गर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीले हालसम्मको आर्थिक समिक्षालाई आफ्नो बक्ताव्यमा समावेश गरी देशको आर्थिक विकासमा राष्ट्र बैंक वित्तीय साधन परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा टेवा पुर्याउन सक्षम रहने बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तिनमहिने सहुलियत घोषणा : (सर्कुलर पत्रसहित)
बैंकिङ खबर । कोरोना संक्रमण र यसको असरले परेको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । उक्त सर्कुलरमा चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने साँवा वा व्याज असार मसान्तसम्म बुझाउदा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत छ राष्ट्र बैंकको सर्कुलर जस्ताको तस्तै ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ (पूर्णपाठ)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ । विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी नियुक्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, उमेर हद तथा योग्यता, तालिम, तलब, भत्ता एवम् सेवा सुविधा, हाजिरी र बिदा, सरुवा तथा वृत्तिविकास, बढुवा, कार्यमूल्यांकन लगायतको व्यवस्थापारे स्पष्ट रुपमा
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था बमोजिम २०७६ साउन ८ गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः पृष्ठभूमि १. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आधारित रहेर देशको आर्थिक एवम् वित्तीय स्थितीको समीक्षा गरेको छ । जसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत छ । ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.४१ प्रतिशत छ । आयात ४.० प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २६.१ प्रतिशतले बढेको छ
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.३३ प्रतिशत छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.५५ प्रतिशत छ । आयात ४.२ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७.० प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ०.१ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.२३ अर्ब ३० करोडले बचतमा छ ।
बैंकिङ खबर । इस्वी सम्वत्को नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । आज (बुधबार)देखि सन् २०२० सुरु भएको छ । सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा धेरै गतिविधिहरु भए । कुनै अप्रिय घटनाहरु भए भने कुनै प्रगतिका कुराहरु भए । हेरौँ केही महत्वपूर्ण घटनाहरुः डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पदबाट बरखास्त
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित रहेर देशको वर्तमान आर्थिक एवम् वित्तीय स्थिती सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत छ । चार महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.२७ प्रतिशत छ । आयात ६.९ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २३.९ प्रतिशतले बढेको
२८ वाणिज्य बैंकको रिपोर्ट : कुनको कमाई कति ?
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै तीन वटा वाणिज्य बैंकको नाफा अर्ब नाघेको छ । आधा दर्जन बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । प्रायः बैंककोृ नाफा सामान्य मात्रै बढेको छ । हेरौँ, प्रथम त्रैमासिक विवरणका आधारमा सबै वाणिज्य बैंकको नाफाः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनाको तथ्यांकमा आधारित नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको समीक्षा गरेको छ । जसअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.२१ प्रतिशत रहेको छ भने तीन महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.४४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, आयात १०.३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १४.४
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती सुधारोन्मुख रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मूल्यवृद्धिदर उच्च रहेको छ भने व्यापारघाटामा थोरै भए पनि संकुचन आएको छ । रेमिट्यान्स घटेको छ भने शोधानान्तर बचतमा छ । हेरौँ समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीः मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति १. २०७६
बैंकमा काम गर्नुहुन्छ ? कर्जा दिँदा यी कुरा ध्यान दिनुहोस् : नत्र लाग्नसक्छ बैंकिङ कसुर !
बैंकिङ बखर । अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । अन्यथा बैंकिङ कसुर लाग्न सक्छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनःगलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याड्ढन